Tomato "Aurora F1": nkọwa nke ụdị dịgasị iche iche, nke akwadoro maka nlekọta na ịkụ mkpụrụ, na itinye mkpụrụ osisi-tomato - Akwukwo nri - 2020
Ngwakọ tomato "Aurora F1" - ụtụtụ na-eto eto na oke mkpụrụ
A na-atụ aro ụdị Aurora F1 dịgasị iche iche na State Register maka ịme ihe na ihe nkiri na ihe nkiri. Nke mbụ, ndị ọrụ ugbo ga-enwe mmasị na ị ga-enwe ike ibido n'ahịa na tomato ọhụrụ.
Ị nwere ike ịmatakwu banyere tomato ndị a n'isiokwu anyị. N'ime ya, anyị ga-ekwupụta ihe ndị bụ isi e ji mara ngwakọ na atụmatụ nke nsị ya, nakwa yana nkọwa zuru oke.
Tomato "Aurora F1": nkọwa nke ọtụtụ
Ohia nke osisi osisi na-emepụta ihe dị elu ruo 55-65, n'okpuru ọnọdụ ọdịda n'okpuru ihe nkiri ruo 70 centimeters. Ngwakọ na ntozu ntozu. Mkpụrụ tomato mbụ nwere nlezianya na-elekọta site na 85-91 ụbọchị mgbe ntoputara nke seedlings. Mgbe a kụrụ n'oge griin, mgbe owuwe ihe ubi, ọ nwere ike ịmị mkpụrụ ọhụrụ ma mepụta mkpụrụ nke mkpụrụ osisi.
Ahia nke nwere ntakịrị obere akwụkwọ nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke ọkara, na-emekarị maka ọdịdị tomato. A na-emepụta ahịhịa mbụ nke mkpụrụ osisi ma ọ bụrụ na a mịchaa akwụkwọ 5-7, ndị nke ọzọ na-esite na 2 epupụta. Dị ka nyocha ndị e nwetara site n'aka ndị na-akọ ubi, ohia ka mma iji jikọta nkwado na-akwado ya. Kasị mma ịrụ ọrụ ngwakọ na-egosi mgbe akpụ osisi 1-2 ị ga.
Uru nke ngwakọ:
Super n'oge maturation.
Ịlaghachi azụ nke ihe ọkụkụ.
Ọchịchọ dị ala nke ọnọdụ na-eto eto.
Nchebe dị mma mgbe ị na-ebufe mkpụrụ osisi.
Ndị na-akọ ubi na-enye nzaghachi mgbe ịmịkọrọ Aurora ngwakọ dị n'otu;
Ụdị nke tomato bụ gburugburu, na-enwe obere ịda mbà n'obi na azuokokoosisi, nchịkọta mkpụrụ osisi na-egosi n'ụzọ dara ogbenye.
Mkpụrụ osisi ndị na-achaghị acha na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba, na-achazi na-acha uhie uhie na-acha ọbara ọbara na-enweghị ntụpọ ntụpọ na azuokokoosisi.
Onu ogugu nke 100-120, mgbe enwere ogo na 140 grams.
Ojiji nke eluigwe na ala, ezigbo uto na dum canning, yana salads, sauces.
Mkpụrụ nke 13-16 kilogram mgbe ọdịda na square. a mita nke ala 6-8 bushes.
Akwa oke nchekwa n'oge njem na-enweghị mbenata ngosi.
Ihe ngwakọ ahụ na-egosi ezigbo iguzogide ọgwụ nje tomato na Alternaria. Site na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche na-egosipụta enyi, nkwụghachi azụ n'oge. Maka nchịkọta abụọ nke mbụ, ị nwere ike inweta ihe dị ka 60-65% nke ihe ọkụkụ ahụ, na oge mgbatị oge na-enye gị ohere wepu ọtụtụ n'ime ihe ọkụkụ ahụ tupu mmalite nke ọrịa blight.
Enweghi ihe di iche di iche iche n'osisi osisi dika ndi ozo di iche iche. Ejiri mmiri mmiri na-atụ aro na mgbede, oge ịtọpụ ala na iwepụ ata. N'ime oge nke uto na mkpụrụ osisi, a gwara ya ka ọ rụọ 2-3 ihe mgbakwunye na fatịlaịza dị mgbagwoju anya.
Onye ọ bụla na-elekọta ubi na-ahọrọ tomato maka akuku, dabere na nhazi ha. Ịhọrọ ngwakọ "Aurora F1" ị pụghị ịga na-ezighị ezi. Mkpụrụ zuru oke-mfri eke, ọbụna mkpụrụ nke ihe ubi ahụ ga-amasị mmadụ nile.